Heart Museum: ^-^မှတ်ကျောက် ^-^
ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆိုတဲ့ ရွာလေးတရွာမှာပေါ့။....
ဒီလိုနဲ့ပဲ အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ဖို့
ရင်ထဲက ရိုးသားမှုဆိုတဲ့ ဆက်ထုံးတွေနဲ့ မြဲခဲ့တယ်။
တခါတလေ ဘ၀မှာ နိမ့်ပါးဖို့လိုအပ်တယ်။
*** မေမိုးရဲ့အကောင်းမြင်ခြင်း အနုပညာကိုဖတ်ပြီး သဘောခြင်းညီလို့ ဒီကဗျာလေး ရေးပါတယ်။***
Posted by Heartmuseum at 6:36 PM
Very meaningful indeed. I love all the words you used here. My spirit is with you as always............ :))
!_! ^ _ ^ !_!
တခါတလေ ဘ၀မှာ နိမ့်ပါးဖို့လိုအပ်တယ်”
လာပြီ.. ရေတစ်ဝက်ကို ရှယ်သောက်ကြတာပေါ့ ၊၊ :)
တခါတလေ ဘ၀မှာ နိမ့်ပါးဖို့လိုအပ်တယ်။"
တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဖန်ခွက်ထဲက ရေ(PH7) ဆိုတာသေချာပါတယ်နော် ဟီးဟီး :P
မမျှော့်လင့်ပဲ တွေ့ ဆုံခဲ့တယ်
ခင်မင်းမှု သံယောဇဉ်တွေက ခိုင်းမာ
ပြောနေကြ စကားတွေက ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ညီအစ်ကိုရင်းတစ်မဗ ပျော်လည်း အတူတူ ၀မ်းနည်းလည်း အတူတူပေါ့ နောက်လည်း အဖော်မရှိပေမယ့် ဖန်ခွက်ထဲက ရေတစ်ဝက် ဝေသောက်ကြတာပေါ့ ။
P-S= သူများကဗျာတွေ စာတွေဖတ်ပြီးရင် အတွေးတွေနဲ့ပို့ စ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ တယ်ကောင်းပါလား ကျနော် ရေးတာတွေကျ တစ်ပုဒ်မှမဖြစ်ဘူးလားဗျ လုပ်စမ်းပါအုံး မောင်ကြွက်ကိုက် ရယ်း)
သင်္ချာသဘောအရ ဖျော်ရည်တစ်ဝက် ထပ်ဖြည့်ရင် ဖျော်ရည်တစ်ခွက် ဖြစ်သွားမယ် ..
မိုက်တယ်ဝေး...bro တို့ ကတော့
ဟုတ်တယ်.. ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတ၀က်တောင် ရှိတာပဲ..
:D အရမ်း ကို ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်းးးး :)
A yan kg nae bar lar heart gyi.. Dote si mar le half shi tal :P
မမြင်နိုင်ပဲဆုံခဲ့တယ် ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ရွှာလေးတစ်ရွှာမှာလေ အဲဒီရွှာလေး ကတစ်ကယ့်ကို မောင်နှစ်မအရင်းတွေလို ညီအစ်ကိုတွေလိုခင်မင်တဲ့ရွာလေးမှာလာနေရတာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဗျာ။ နောက်နောင်လည်းဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ။
no1 is an island..we all need someone..at sometimes in our lives!
:d lovely poem..good inspiration!!! wee...
ငါ့အကို ကဗျာလည်းရတာပဲ.. မိုက်တယ်ဝေ့ :D
ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆိုတဲ့ ရွာလေးမှာ ပျော်ရွှင်စွာနေနှိုင်ပါစေ။
အလယ့်. "Heart" ကြီး တယ်ဟုတ်.
“လူ့ လဲ.“ဝ” အီနုပီညာ. မြီလာ စိလယ်ပေါ့”
(အီကောင်း) :P :lol::: ^_*:::lol
ကဗျာ လေးကောင်းပါတယ်.Bro..Keep on =>
ဖန်ခွက်ထဲက ရေတ၀က်ကို မျှသောက်မဲ့သူ အညတရ အပါအ၀င် ၁၉ယောက် ရှိတယ်။ တယောက်တစက်စီ ရမယ်။ ဟီးးးးးးးးးးးး ဟီးးးးးးးးးးး
ကျွန်တော် တစ်စက်သောက်သွားတယ် ...။
ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတ၀က်ရှိတယ်။ Whatagreat creative thinking....! Keep it up :)
မင်္ဂလာပါ ကိုဟ၊ ဒီလို့ပဲလေ ကိုယ်အစွမ်းနဲ့မဟုတ်ဘူး ပျင်းလို့... အနားမှာ ဆရာတွေ ရှိတယ်၊ အကူအညီတောင်းရင် အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...